John Rambo ကိုကာကွယ်ကြပါစို့ ~ Myo Chit Myanmar
John Rambo ကိုကာကွယ်ကြပါစို့
2:20 PM6comments
ခုဒီနေ့ email တွေဝင်လာတော့ဖတ်ပြီး စိတ်ထဲမကောင်းဖြစ်သွားတယ်ဗျာ
Rambo ကားနဲ့ပါတ်သက်ပြီး ကိုအောင်သူငြိမ်း မအိမ့်ချမ်းမြေ့ နဲ့ ကိုမွှေးတို့ ရေးထားတာတွေ
ဒီကိစ္စနဲ့ပါတ်သက်ပြီး ကျွန်တော် ပြောချင်လာတယ်ဗျာ
ဒီတော့ ကျွန်တော် ဝင်မပါဘူးလို့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ပေးထားတဲ့ ကတိကိုဖျက်လိုက်မိတယ်
ဒီတော့ ကိုယ်ခံစားရသလို ပြောကြ ရေးကြတာ ကျွန်တော် နားလည်ပါတယ်
ရှင်းရှင်းပြောရရင် စာရေးတဲ့ သက်တမ်းမှာ ကျွန်တော်က ကလေး ပါဘဲ
ဒီတော့ အတွေ့အကြုံအရ အများကြီးနုပါသေးတယ်
ဒါကြောင့် ကျွန်တော် ဆရာကြီး ဝင်လုပ်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတာ အရင်ဝန်ခံပါရစေ
ကျွန်တော် လူပြိန်းတစ်ယောက်အနေနဲ့ မြင်တာကိုပြောပါရစေဗျာ
မအိမ့်ချမ်းမြေ့ နဲ့ ကိုအောင်သူငြိမ်း ကိုတော့ ကျွန်တော် လူချင်းမဆက်သွယ်ဖူးပါဘူး
ကိုမွှေးကတော့ ကျွန်တော့် အကိုလို ခင်တဲ့ မိတ်ဆွေပါ
ဒီအကိုအမတွေ အပြင်မှာနေထိုင်တဲ့ ဘဝတွေ လုံးဝမတူပါဘူးဆိုတာတော့ သိပါတယ်
ဒါပေမယ့် ကျွန်တော် သေချာသိတာတခုတော့ရှိတယ်
အဲဒါကတော့ သူတို့ရော ကျွန်တော်ပါ မွန်းကျပ်နေတဲ့ နှလုံးသားတွေနဲ့ အသက်ရှင်နေရပါတယ်
၈၈ ထဲက ကျွန်တော်တို့ရင်ထဲမှာ ဒါဏ်ရာတွေရခဲ့ကြတယ်
မျက်ရေတွေနဲ့ လန့်နိုးခဲ့ရတဲ့ ညတွေကိုဖြတ်သန်းခဲ့ရတယ်
ခွပ်ဒေါင်း အလံကိုကြည့်ရင်း ကြက်သီး ထခဲ့ဖူးတယ်
September တုန်းက ညတိုင်း မိုးလင်းတဲ့အထိ ဒေါသတွေကို စားသုံးခဲ့ဖူးတယ်
ဒီဒုက္ခတွေထဲ အတူနေထိုင်ရှင်သန် ဖြတ်သန်းလာခဲ့ပြီး ခုကြမှဗျာ
ဘာမဟုတ်တဲ့ Hollywood က Creation တခုအတွက် သွေးကွဲကြတော့မှာလား
Mr. Stallone ကလဲ အပြင်ဘဝမှာ Rambo မဟုတ်ပါဘူး
သူလဲရုပ်ရှင်အလုပ်ကို စီးပွားရေးအရ လုပ်စားနေရတာပါ
ဒါပေမယ့် ဒီကားကိုရိုက်တုန်းက မြန်မာပြည် တစ်ခုထဲကိုရွေးစရာရှိခဲ့တာ မဟုတ်ဘူး
Middle East မှာရိုက်စရာအကြောင်းတွေ အများကြီးရှိနေတယ်
အဲဒီ နိုင်ငံတွေအကြောင်း ရိုက်ရင် လူတွေတောင်ပို ကြိုက်ကြဦးမှာပါ
နောက်ပြီးသူ ဒီဇာတ်လမ်းကို စရေးတုန်းက မြန်မာပြည်မှာအားလုံး ငြိမ်သက်နေပါသေးတယ်
September အရေးအခင်းကြောင့် ထလုပ်တာမဟုတ်ပါဘူးဗျာ
ဒီတော့ ဒါကိုစီးပွားရေး အမြတ်ထုတ်တယ်လို့ စွတ်စွဲလို့မရပါဘူး
နောက်ပြီးတော့ ရုပ်ရှင်သမားက ရုပ်ရှင်လိုဘဲရိုက်မှာပေါ့ဗျာ
တကယ်တောထဲမှာ တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ ကျောင်းသားတွေ
သူတို့ကိုမေးကြည့်ရင် စစ်တပ်က ဒီထက်ရက်စက်ပါတယ်ဆိုတာ သိမှာပါ
ကျွန်တော်တို့မောင်နှစ်မတွေ ရုပ်ရှင်တစ်ကားကြောင့် သွေးမကွဲစေချင်ဘူး
နောက်ပြီး ကျွန်တော် ကိုယ်တိုင် ရုပ်ရှင်လောကထဲကလာခဲ့တာပါ
ရုပ်ရှင်ကို ရုပ်ရှင်လို ဘဲကြည့်ကြပါဗျာ
Superman ကားပြတုန်းကကြတော့ ဘာလို့မဝေဖန်ခဲ့ကြသလဲ
လူက ပျံ လို့မှမရတာလို့ ယုတ္ထိဗေဒ ကျကျ ဘာလို့ မတွေးကြတာလဲ
ရှင်းပါတယ်ဗျာ ရုပ်ရှင်မို့လို့ပေါ့ ဒီလိုပါဘဲဗျာ
ကျွန်တော်တို့ အခု အပြစ်တွေ ဝိုင်းတင်နေတဲ့ Stallone ကြီး ခင်ဗျာမလဲ ခံစားတတ်ခဲ့ပါတယ်
သူခံစားခဲ့ရလို့လဲ ဒီ ဇာတ်ကားကနေတဆင့် မြန်မာ စစ်တပ်ရဲ့ ဆိုးသွမ်းမိုက်ရိုင်းမှုတွေကို
တစ်ကမ္ဘာလုံးက သတိထားမိသွားတာပါ အဲဒါလေးရော တွေးမိကြပါရဲ့လားဗျာ
ဒီတော့ ကျွန်တော်တို့ သူ့ကို အပြစ်တင်မယ်ဆိုရင်မှားတယ်ဗျ
တကယ်ဆို ကိုယ့်နိုင်ငံရဲ့ ဒုက္ခကို ဝေမျှ ခံစားပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်သင့်ပါတယ်
နောက်ပြီး စည်းလုံးညီညွတ်ကြရမယ့် အချိန်မှာ အချင်းချင်းတိုက်ခိုက်နေကြတာ
နအဖ ကို အားဆေးကျွေးနေသလိုဖြစ်ပါတယ်
ဒီတော့ ကိုအောင်သူငြိမ်း မအိမ့်ချမ်းမြေ့ နဲ့ ကိုမွှေး တို့ရေ
သူ့ဘာသူတတ်နှိုင်တဲ့နည်းနဲ့ မြန်မာပြည်သားတွေကို ကမ္ဘာကြီးက စာနာတတ်လာအောင်
Mr. Stallone သို့မဟုတ် John Rambo ကြီးကို
မျိုးချစ် စိတ်အပြည့်နဲ့ ပန့်ပိုးရင်း ဝိုင်းဝန်း ကာကွယ်ကြရအောင်ဗျာ
There is nothing wrong with RAMBO movie. He isasupporter of burmese people and he is so proud of making this video he saids. He is doing business in one way but He do this for us.
ကိုမျိုးချစ် ရမ်ဘို ကသူ.အလုပ်သူလုပ် သူ.တာဝန်သူ ကျေ သွားပြီဘဲ ဇာတ်ကားတကား ဖြစ်မြောက်သွားပြီ။ ဒို.မြန်မာတွေ ဘာဆက်လုပ်မလဲ။ ငြင်းနေရရင် ပြီးရောလား။ ဒီမိုကရေစီ က အတိအကျ ပြောပြီးသားဘဲ လွတ်လပ်စွာ သဘောကွဲလွဲလို. ရပါသည်တဲ့။
ဇာတ်ကား စလုပ်နေတဲ့အချိန်က အဖွဲ.အစည်းများ ကနေပြီးသောလည်းကောင်း မြန်မာနိူင်ငံနယ်စပ်အခြေအနေကို အမှန်တကယ် သိနားလည်သူများမှ လည်းကောင်း အကြံအဥာဏ် ပေးနိူင်ခဲ့ရင် ဖြင့် အားလုံးမျှော်လင့် တောင်းတ နေတဲ့ ဇာတ်အိမ်ကောင်းတဲ့ တိကျတဲ့ တကယ့်နယ်စပ် မှာဖြစ်နေတဲ့ အကြောင်းအရာများ ကို အခြေပြုတဲ့ မြန်မာပြည် ဇာတ်ကား ကောင်းကြီးထွက်လာမှာမလွှဲပါဘူး။ တခုတော့ စဉ်းစားသင့်တာက ထွက်ပြီးဝေဖန်တာထက် ကိုယ့်ဖက်ကကိုယ် ဘာလုပ်ပေးနိူင်တယ် ဆိုတာကို စိတ်ဝင်တစား ကမ်းလှမ်းနိူ်င်ရင် ပိုကောင်းမည် ထင်ပါသည်။ အကြံပြုတဲ့ သဘောပါ။
လက်ရှိမှာ ကတော့ မြန်မာ့အရေးကို လောလောဆယ် အနီးစပ်ဆုံး တင်ပြနိူင် တာ ဒီတကားဘဲ ရှိသေးတဲ့ အတွက် နိူင်ငံတကာ အသိုင်းအ၀န်း မှာ မြန်မာ့အရေး ကို မီးမောင်း ထိုးပြခွင့် ရအောင် Rambo ဇာတ်ကားကို ညွှန်းရမှာပါဘဲ။
Singapore ကညီအစ်ကို မောင်နှမ များရဲ့ စွမ်းဆောင်ချက်များ ကို ချီးကျူးဂုဏ်ယူ မိပါတယ်။ အားလုံး စံနမူနာယူ ထိုက်ပါတယ်။
မြန်မာနိူင်ငံ လွတ်လပ်ရေး အတွက် အတူ ဆောင်ရွက်ကြရ အောင်လား ခင်ဗျား။
ဟုတ်တယ်။ မြန်မာပြည်အကြောင်း မသိတဲ့ သူတွေ အများကြီးပဲ ကျွန်တော်တို့က ပြည်ပရောက်နေတော့ ကျွန်တော်တို့ပဲ ရှိတယ်။ မြန်မာပြည်မှာ ဘာတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာ.. ခုဆို မြန်မာပြည် ဘာဖြစ်နေလဲဆိုရင် ရမ်ဘိုကားကြည့်လို့သာ ပြောနေရတယ်။ ဒါဆို အကုန်မြင်သွားမယ်..
I agree with you ,and Moe Htet Nay. Why don't we see Rambo asamovie. I believe that Rambo movie gives some info abt crisis in our country. Media isapowerful weapon;Show Biz isapart of the media. Because of the movie,Hotel Rwanda, people can see what has happened in that area. Otherwise, nobody cares about Rwanda, same as Burma. But you know,different folks have different thoughts.
hello ko myochit,
Dear Ko MyoChit,
We admire and thanks to Mr Rambo
supporting the people under pressure.
Media isagood weapon.
thanks to all helping us.